अराजक शब्दहरु: 11/06/20
आलेखमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया रजगज, त्यसको अर्थराजनीतिक आयाम र असरबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
०६२-०६३ सालपछि अड्डा—अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका झगडियाका बीचमा बसेर ‘चलखेल’ गर्ने र फैसला प्रभावित पार्न भूमिका खेल्नेलाई ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
बिचौलियालाई काम गरेबापत सेवाशुल्क लिने ‘ब्रोकर’ वा मध्यस्थकर्ताका रूपमा मात्र बुझिनु गलत हुन्छ । सेवाका आधारमा शुल्क लिनु मनासिव हो । बिचौलियाको ध्याउन्न चाहिँ नियम–कानुन पालन गर्नेभन्दा पनि ‘मिलाउने’तिर हुन्छ । मुलुकमा यस्ता बिचौलिया मूलतः तीन किमिमका देखिन्छन्– व्यक्ति वा सानो समूह, संस्था वा संगठित समूह र सरकार वा राज्य तह ।
सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ हुँदा चर्को जरिवाना लिने सरकार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न भने डेढ वर्षसम्म कुराउँछ र बिचौलियाका लागि स्वर्ण अवसर बनाइदिन्छ ।
इन्टरनेट स्वतन्त्रताको जतिसुकै गफ गरे पनि हामीले दक्षिण एसियामै महँगो इन्टरनेट चलाउनुपरेको छ । एकातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कार्टेलिङ छँदै छ, अर्कोतिर राज्यले इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्छ ।
किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी भिझ्याउँदा पाँच तहका बिचौलिया लाग्छन्, जसकारण भान्छा महँगिएको छ ।
सम्भवतः काठमाडौं गरिब देशको सबैभन्दा महँगो सहरमा पर्छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’को रिपोर्टअनुसार ढाका र कोलम्बोपछि काठमाडौं दक्षिण एसियाकै महँगो सहर हो । दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लोर र कराँची काठमाडौंभन्दा सस्ता सहर हुन् । हाम्रा अन्य सहरको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन । पोखरा उसै पनि सर्वसाधारणका लागि युरोपभन्दा कम छैन ।
सरकारी खरिद–बिक्रीमा सूचना आह्वान गर्दादेखि नै भ्रष्टाचारको ‘इकोसिस्टम’ सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन नबुझाई सूचना पनि सार्वजनिक हुँदैन, बाँकी कामको हिसाबै नगरौँ ।
राज्य प्रशासनमा दलीय ‘ट्रेड युनियन’का नाममा बिचौलिया प्रवृत्ति उसैगरी झाँगिएको छ ।
मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलसम्म, प्रतिवादी वकिलदेखि न्यायधीशसम्मलाई प्रभावमा राख्नु र फैसला प्रभावित गर्नु तिनको ध्येय हुन्छ । चलचित्रमा देखिने ‘बेन्च सपिङ’का प्रयास यहाँ देखिएका छन् र बिचौलियाका कारण न्याय महँगो मात्र भएको छैन, न्याय मर्दै पनि गएको छ ।
स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘ब्रेथलाइफ’का अनुसार दूषित हावाका कारण मुलुकमा बर्सेनि झन्डै ३८ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यो संख्या १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा मारिनेको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी हो । अर्को अध्ययनले विगत १२ वर्षमा नेपालमा २२ हजार नौ सयजनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखाएको छ । तैपनि सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज यस्ता कृत्रिम–विपत्तिप्रति बेपर्वाह छन् ।
अहिले ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार देखिँदैनन्, बिचौलियामार्फत त्यसको ‘व्यवस्थापन’ हुन्छ । कतिपय घोटालामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ होइन, समन्वय देखिन्छ । त्यसैले ठूला र प्रभावशाली भ्रष्टाचारी सिनमा देखिन्नन् । अपवादबाहेक अख्तियार र अदालतले देख्ने त हजारिया घुस्याहा मात्र हुन् ।
पूर्वप्रशासक भोजराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो सिंहदरबार वा बालुवाटारमा छैन, अन्त कतै छ ।’
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 3:05:00 PM No comments:
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 1:37:00 PM No comments:
सहसचिव र उपसचिव परीक्षा तयारीका सहज तरीका-दामोदर रेग्मी
सहसचिवको परीक्षा प्रणाली
क. लिखित परीक्षा (Written Exam)
ख. कौशल/गुणमापक परीक्षण (Competency Test)
ग. अन्तर्वार्ता (Interview)
लिखित परीक्षाको लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजनामा प्रथम पत्र शासकीय प्रबन्ध र विकास रहेको छ ।
दोश्रो पत्र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, नैतिकता र व्यवसायिकता रहेको छ ।
तृतीय पत्रमा प्रशासन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, संसद र न्याय (न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह) सेवाको लागि सम्बन्धित सेवा अनुरुप फरक-फरक विषय राखिएका छन् । यी तीनै पत्रहरुको पूर्णांक सय-सय रहेको र उत्तीर्णांक चालीस-चालीस रहेको छ र समय ३ घण्टा रहेको छ । प्रथम र दोश्रो पत्रमा पच्चीस अंकभारका चार-चार वटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् । तृतीय पत्रमा सेवा समूह अनुसार प्रत्येक एकाइबाट एक एकवटा प्रश्नहरु सोधिन्छन् ।
तीनै पत्रको परीक्षा प्रणाली समीक्षात्मक विश्लेषण र समस्या समाधान रहेको छ ।
लिखित परीक्षाको यो परीक्षा प्रणालीमा सफलताको लागि पाठ्यक्रमको गहन जानकारी, पाठ्यक्रमका विषयहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध, ती विषयहरुको सैध्दान्तिक अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति र नेपालमा त्यसको प्रयोग, समस्या र समाधानका उपायहरुबारे जानकार हुनु आवश्यक छ ।
सोधिएका प्रश्नहरुमा समस्या के हो ? समस्याको कारणहरु के के हुन् ? समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ? समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमको वारेमा स्पष्ट हुने गरी लेख्नु आवश्यक हुन्छ ।
लिखित परीक्षाले सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषण क्षमताको परीक्षण गर्ने गर्दछ । लिखित परीक्षाको तयारीमा पाठ्यक्रमको सबै विषय समेटिएका पुस्तक पढ्ने र पढिएका शीर्षकबीच अन्तरआबध्दता खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
यो परीक्षामा मामिलाको व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण गर्नु पर्दछ । यसकोसंग पूर्णांक ५० समय ५० मिनेट रहेको छ । यसमा कुनै विषयमा समस्या दिइएको हुन्छ । परीक्षार्थीले आफूलाई प्राप्त समस्याको शीघ्र पावर प्वाइन्ट बनाइ प्रस्तुति गर्नु पर्दछ । दिइएको मामिलामा मूल समस्या के हो, समस्याको कारणहरु के के हुन् ?, समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ?, समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?, यसको लागि जिम्मेवार र सहयोगी निकाय कुन् कुन हुन् ?, समस्या समाधानार्थ नीतिगत, संस्थागत, श्रोतगत, मानवश्रोत र सम्बोधन खोजेका अन्य क्षेत्रको बारेमा सटीक र स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुति गर्नु आवश्यक हुन्छ । कौशल/गुणमापक परीक्षणले परीक्षार्थीको व्यवहारोपयोगी सिर्जनशीलताको परीक्षण गर्ने गर्दछ ।
४० पूर्णांक रहेको अन्तर्वार्ता बोर्ड अन्तर्वार्ता परीक्षा प्रणालीमा आधारित रहेको छ । यसमा विषय विज्ञहरुको समितिले पाठ्यक्रम, अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति, समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर वाक् परीक्षा लिने गर्दछ । यसमा परीक्षार्थीको सिर्जनशीलता, नेतृत्व कौशलता, धैर्यता जस्ता पक्षहरुको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
उपसचिवको परीक्षा प्रणाली
क. लिखित परीक्षा
ख. सक्षमता परीक्षण
नेपाल प्रशासन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, संसद र न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना निम्नानुसार रहेको छ
प्रथम चरण — लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क — २०० समय तीन-तीन घण्टा
• प्रथम पत्र प्रशासन र व्यवस्थापन (सबै सेवा समूहको लागि)
• दोश्रो पत्र सेवा सम्बन्धी (प्रत्येक सेवा/समूहका लागि छुट्टाछुट्टै)
• यसमा दुबै पत्रहरुमा १५ अंकभारका १ वटा प्रश्न जसको उत्तर सैद्घान्तिक —तर्कयुक्त र विश्लेषणात्मक हुनुपर्ने, २० अंकभारका ३ वटा समस्या समाधानमूलक प्रश्न र २५ अंकभारको १ वटा मामिला विश्लेषण संग सम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छन् ।
दोश्रो चरण सक्षमता परीक्षण पूर्णाङ्क — ३० समय ५० मिनेट
• डालोमा रहेको समस्याबाट एउटा समस्या लिने र सो समस्यालाई तत्कालै लिखित उत्तर दिने
• दिइएको समस्यामा मूल समस्या के हो, समस्याको कारणहरु के के हुन् ?, समस्याका प्रभावहरु के के हुन् ?, समस्याको समाधानार्थ चालिनुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?, यसको लागि जिम्मेवार र सहयोगी निकाय कुन् कुन हुन् ?, समस्या समाधानार्थ नीतिगत, संस्थागत, श्रोतगत, मानवश्रोत र सम्बोधन खोजेका अन्य क्षेत्रको वारेमा सटीक र स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुति गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा परीक्षार्थीको व्यवहारोपयोगी सिर्जनशीलताको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
तृतीय चरण —अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क — ३०
बोर्ड अन्तर्वार्ता विधिमा आधारित यस प्रणालीमा विषय विज्ञहरुको समितिले पाठ्यक्रम, अवधारणा, नवीनतम प्रवृत्ति, समसामयिक विषयहरुमा आधारित रहेर वाक् परीक्षा लिने गर्दछ । यसमा परीक्षार्थीको सिर्जनशीलता, नेतृत्व कौशलता, धैर्यता जस्ता पक्षहरुको परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
पुस्तकको छनौट कसरी गर्ने
बजारमा लोकसेवा परीक्षालाई लक्षित गरेर लेखिएका थुप्रै पुस्तकहरु पाइन्छन् उचित सन्दर्भ सामग्री प्रयोग भएका सामयिक विषयको छनौट र परीक्षाको प्रस्तुतिमा ध्यान दिएर लेखिएका लेखकहरुको पुस्तक छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ। पुस्तक यस्तो किनौं जो परीक्षाका अतिरिक्त अन्य समय र सन्दर्भमा समेत उपयोगी बनोस । जसले परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुको साथै पछि पनि काम लागोस् ।
आधारभूत विषय तथा पुस्तकहरु
सबै परीक्षाको लागि केही पुस्तकहरु आधारभूत हुने गर्दछन् जस्तो संविधान निजामती सेवा एन र नियमावली आवधिक योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्य आर्थिक सामाजिक सूचकहरु राजनैतिक प्रणाली विश्व परिवेशमा चर्चामा रहेका विषयहरु सेवा समूहसंग सम्बन्धित नीतिहरु । यी विषयहरुमा जानकार हुनु आवश्यक हुन्छ ।
पढाइको शुरुवात कसरी गर्ने ?
पुस्तकको छनौट गर्नुपूर्व कुन पदको परीक्षा दिदैछौ सो को पाठ्यक्रम के छ ?, सो जानकारी हुनु पर्दछ । यसपछि सो पाठ्यक्रममा समावेश भएका सबै विषय रहेका जुनसुकै पुस्तकहरुलाई आफ्नो मूल पाठ्यसामग्री बनाउन सकिन्छ । शुरुमा पढिने यी पुस्तकहरु छोटो छरितो र सरल भाषामा भएको भएमा विषय र अवधारणा बुझ्न सजिलो हुन्छ। शुरुको यो पढाइले हामीलाई पाठ्यक्रमको समग्र विषयसंग परिचित गराइदिन्छ । यो पढाइले हामीमा एक तहको क्षमता विकास गरिदिन्छ । तर यो चरणको पढाइले मात्र निखारता आइसकेको हुदैन र प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्ण बनाएको पनि हुदैन । यसर्थ अब आधिकारिक किताब जसमा पाठ्यक्रमका विषयहरुलाई सैध्दान्तिक पक्ष अन्तरार्ष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोगको अवस्था प्रवृत्ति अवसर र चुनौतीहरु लगायतका पक्षमा वर्णनात्मक प्रस्तुति रहेका पुस्तक पढ्नु पर्दछ । दोश्रो चरणको यो पढाइले हामीमा आत्म विश्वास बढाइदिन्छ। लोक सेवा आयोगको परीक्षण प्रणाली बहु आयाममा आधारित भएकोले तयारी पनि तदनुरुप हुनु आवश्यक छ ।
पढ्ने र सम्झने कसरी ?
• दैनिक कति समय पढ्ने हो त्यसको कार्ययोजना बनाउने
• धेरै समय पढेर कम कुरा स्मृतिमा राख्ननुको साटो पढेजति सम्झन सकिने किसिमबाट पढ्ने
• पढ्दा आफूलाई सजिलो हुने गरी नोट तयार गर्ने
• एक विषय पढिसकेपछि अर्को विषय पढ्दा ती दुई विषयको अन्तरसम्बन्ध पहिचान गर्ने
• विषयहरुको एक अर्कासंगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने
• पढेका कुरालाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने
• पढाइ पछि कुन कुन विषयलाइ कुन कुन कोणवाट परीक्षामा कसरी सोध्न सक्ने संभावना हुन्छ त्यसको बारेमा एक्लै गम्ने वा मनमिल्दो साथीसंग छलफल गर्ने
• सम्झन कठीन कुराहरुलाई सूत्र अक्षर वा अंकको आधारमा सम्झने
• तथ्यांकहरुलाई कहां-कहां कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यसको अन्तर आवध्दता के हो र त्यसले कस्तो प्रवृत्तिको संकेत गरिरहेको छ सो बारे स्पष्ट हुने ,
अरु भन्दा भिन्न कसरी हुने ?
सफलता प्राप्तिको लागि अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो र फरक बन्नु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि सम्बन्धित संस्थाका वेवसाइट जर्नल प्रतिवेदन विभिन्न सर्च इन्जिनबाट नयां सामग्री तथा चित्रमय प्रस्तुति खोज्ने गर्नु पर्दछ । तेश्रो तहको पढाइले हामीलाई अरु प्रतिस्पर्धी भन्दा भिन्न आकर्षक र सवल बनाइदिन्छ । पढाइमा यी तीन तहको श्रृंखलाबध्द संयोजनको आवश्यकता रहन्छ । लोक सेवा वा अन्य यस्ता प्रकृतिका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लेखाई राम्रो भएर मात्र पुग्दैन अरु प्रतिस्पर्धीको भन्दा विचारोत्तेजक, सिर्जनशील र वस्तुपरक हुनु अति आवश्यक हुन्छ । जसले परीक्षामा सफलता हासिल गर्नमा सहयोग पुर्याउंदछ ।
उत्तरको लेखन कसरी ?
उत्तरमा कुनै प्रश्नका सबै विषय सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । जस्तो के ?, किन कसरी ?, कहिले ?, कसले ? उत्तरको शुरुवात प्रश्नको मूल आशयको सम्बोधनबाट हुनु आवश्यक छ । यसपछि सो विषयको अवधारणात्मक पक्ष के हो यसको प्रयोग अन्तर्राष्ट्यि रुपमा कसरी भैरहेको छ । के कस्ता नवीनतम अवधारणाहरु प्रयोग भएका छन् ?, नेपालमा कानूनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था के कस्तो छ ? सकारात्मक पक्षहरु के के छन् ? र कमजोरीका क्षेत्रहरु कहां कहां छन ? र ती कमजोरी हटाउन के कस्ता सुधारहरुको आवश्यकता छ ? भन्ने विषयलाई समय सीमा भित्र रहदै समेटिनु आवश्यक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटा प्रश्नमा धेरै विषय संग जोडेर प्रश्नहरु सोधिएका हुन्छन् यसरी सोधिएका सबै विषयलाई उत्तरले सम्बोधन गर्नु पर्दछ र सकारात्मक र नकारात्मक सम्बन्ध वा प्रभावका क्षेत्रहरु पहिचान गरिदै जानु पर्दछ ।
लिखित परीक्षाको तयारी र लेखन शैलीबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध
लिखित परीक्षाको तयारी पढाइको तयारीसंगै शुरु हुनुपर्दछ । पढ्दा पाठ्यक्रमका सबै विषयको न्यूनतम जानकारी राख्ने र एक शीर्षकको अन्य शीर्षकसंग अन्तर सम्बन्ध खोज्ने गर्नु पर्दछ । पढाइ लेखाइ दुबैले आवश्यक सूचनाको अतिरिक्त नवीनता, सिर्जनशीलता र पूर्णताको माग गर्दछ । पढाइ इनपुट हो भने शीर्षकहरु र मुद्दाहरुबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय प्रोसेस हो लेखाइ आउटपुट हो । इनपुट र प्रोसेसबीच सामन्जस्यता हुन सके मात्र राम्रो आउटपुट निस्कन्छ । यी तीन प्रक्रियाको सवल समायोजनले राम्रो आउटकम अर्थात राम्रो अंक प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउंदछ । विषयहरुको एक अर्का संगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र पढेका कुरालाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने गरि पढिएमा त्यसले लेखाइमा प्रभावकारिता ल्याउंछ ।
उत्तर बुँदागत कि विश्लेषणात्मक ? चित्र राख्ने नराख्ने ?
शुरुवात सधै अनुच्छेदबाट गर्ने, राम्रा पक्ष, नराम्रा पक्ष, नीतिगत र संरचनागत पक्षहरुलाई उप शीर्षक बनाइ बूंदागत रुपमा पनि लेख्न सकिन्छ । समस्याको पहिचान वा समाधानका उपायहरु पनि बूंदामा लेख्दा राम्रो देखिन्छ । तर यसरी बूंदामा लेखिएका विषयहरुलाई थप विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ, विश्लेषण अनुच्छेदमा कलात्मक र आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरिनु राम्रो हुन्छ ।
आवश्यकता अनुसार लेखिएका कुराको संक्षिप्त प्रस्तुति र आकर्षकताको लागि रेखा चित्रहरु राख्नु पनि राम्रो हुन्छ । निष्कर्ष वा प्रश्नले माग गरेको उत्तरको निचोड पनि अनुच्छेदमा आउनु राम्रो हुन्छ । यसरी उत्तरमा बूंदा र अनुच्छेद दुबै प्रयोगमा आउन सक्दछन् । सूचनाको सामान्य प्रस्तुती वूंदा मार्फत र त्यसको विश्लेषण अनुच्छेदमा आउनु पर्दछ । बूंदाको प्रस्तुतिले परीक्षार्थीहरुको ज्ञानको स्तर मापन गर्न सकिन्छ भने अनुच्छेदले सिर्जनशीलता । बूंदा लेखनले समयको बचत हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी प्रस्तुतिको लागि विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । यी दुबै पक्षको समायोजनले हाम्रो प्रस्तुति आकर्षक हुने र समय व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्दछ ।
उत्तरको खण्ड विभाजन
यसमा कम्तीमा तीन खण्ड हुनु पर्दछ । पहिलो सोधिएको पक्षको अवधारणात्मक पक्ष, दोश्रो प्रश्न केन्द्रित रहेको पक्षको स्थिति विश्लेषण तथा समाधानका संभाव्य क्षेत्रहरु र तेश्रो आशावादिता वा सकारात्मक समाधान सहितको निचोड । पहिलो र तेश्रो खण्डका प्रस्तुति छोटो, आकर्षक र पत्यारिलो हुनु आवश्यक हुन्छ भने दोश्रो भागले पहिलो र तेश्रो भागकोबीचमा सामन्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुनु पर्दछ र सूचनाको व्यवस्थापन आकर्षक ढंगले गरिनु पर्दछ ।
समय व्यवस्थापनमा कौशलता
अधिकांश परीक्षार्थीहरुमा समय व्यवस्थापनको समस्या देखिने गर्दछ । यो कौशलताको बुध्दिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । यसका लागि प्रश्नको अंकभार अनुसार समय विभाजन गर्ने, बढी अंकभार भएका प्रश्न एउटा निश्चित अवधिभित्र लेखिसक्ने पूर्व योजना, बढी जानेको विषयलाई निर्धारित समयावधी भन्दा बढी नलम्ब्याउने, कम जानेका विषयलाई छोड्ने वा कम लेख्ने नगरी एउटा निश्चित परिमाणमा लेख्ने जस्ता विषयहरु परीक्षामा सामेल हुनुपूर्व नै समय योजना बनाउने र परीक्षाहलमा प्रश्नपत्र पाइसकेपछि प्रश्नको आधारमा पूर्व निर्धारित समय योजनामा तत्कालै सामान्य परिमार्जन गरि तत्काल उत्तर लेख्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।
अंकभारको अनुपातमा समय व्यवस्थापन
प्रश्न जति अंकभारको छ र सो अंकभारले कूल प्रश्नको अनुपातमा कति समय माग गर्दछ सोही परिधिको सामान्य सीमारेखा कायम हुने गरि उत्तरको लम्बाइ व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । जानेका कुराको प्रस्तुती आकर्षक बनाउनुको अतिरिक्त समय सीमाको लक्ष्मण रेखाको पालना हुनु पनि आवश्यक पर्दछ । लेखनको गति कम हुने व्यक्तिले समय व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ । कुनै विषयलाई विस्तार र संकुचन गर्न सक्ने गरि पढिएमा अंकभारको अनुपातमा समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अक्षर र सुद्धासुद्धि
अक्षर सकभर राम्रो हुनु आवश्यक छ तर उत्तर पूर्ण वा सन्तोषजनक भएन भने राम्रो अक्षरलेमात्र काम गर्दैन । त्यस्तै उत्तर सही लेखिए पनि अक्षर नबुझिए त्यसको पनि कुनै अर्थ रहदैन । यसर्थ कम्तीमा पनि अरुले पढ्न सक्ने अक्षर हुनुपर्दछ र सुद्धासुद्धिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
आत्म विश्वास सफलताको महत्वपूर्ण सारथी
सबै तयारी पूरा भए पनि तयारीका हरक्षण आत्म विश्वासलेयुक्त र सफलताप्रति आशावादी हुनु आवश्यक छ । आशावादिताले उत्साह र सकारात्मकताको संचार गरिदिन्छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 8:46:00 AM No comments:
संविधानमा महिलाको हकअन्तरगत ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
मृत्युदण्ड नै अपराध रोक्ने अचुक उपाय होइन भन्ने कुरा दुनियाँको घटनाले देखाएकै छ । तर पनि, यस्ता आवाज पटक–पटक नहोदोरिनका लागि पनि मृत्युदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रको प्रतिवद्धता, प्रक्रिया र प्रावधानका बारेमा जनस्तरमा यस सन्दर्भको बहसलाई अन्यथा मान्न आवश्यक छैन ।
जनताको आवाज सुन्ने र सम्भव विकल्पको संस्थागत व्यवस्था गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । यही दायित्वलाई अनुभुत गर्दै नीति र कानुन बनाउने शीर्ष संस्था संघीय संसद यस्ता सम्वेदनशील विषयमा व्यवस्थित छलफल, विषयको पहिचान र साझा दृष्टिकोणका साथ समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने थलो बन्नुपर्दछ । यो समयले ल्याएको माग, आवश्यकता र दायित्व पनि हो ।
असोज १२ गते संघीय संसदका उपलब्ध महिला सदस्यहरुका बीच अनौपचारिक भेलाबाट सर्वदलीय सहभागितामा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ बनेको छ ।
बनेका नीति र कानुनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काममा चासोपुर्ण पहल गर्नेछ । अपर्याप्त कानुनमा संशोधन र आवश्यक थप कानुन निर्माणको विषय पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव, सिफारिस र प्रस्तावका लागि पहल गर्नेछ ।
यस सन्दर्भमा पाँचवटा काम तत्काल गरिनुपर्ने कुरा समूहले अगाडि सारेको छ ।
घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना : बनेका कानुनी व्यवस्थाको वारेमा आम नागरिकको जानकारी लागि समुदाय हुँदै परिवारको तहमा प्रचार आवश्यक
घटनाको निष्पक्ष छानविन : नागरिक सचेतना जति नै बढाए पनि अपराधको निराकरण नै हुन्छ भन्ने छैन । घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्ने काममा समुदाय, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट हुँदै आएका कमजोरीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन : आपराधिक घटनामा समेत समुदायमा पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । यसर्थ यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई समेत फौज्दारी अपराध कार्य अन्तरगत कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पीडित र प्रभावितलाई न्याय : पीडितप्रति रहदै आएको खोटपूर्ण दृष्टिकोणमा गुणात्मक तहमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन : सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम आचार र मर्यादा, कानुनी प्रावधान र व्यक्ति/परिवारको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरी अमार्दितरुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय युट्युव च्यानलहरु समाजमा अराजकताको कारक पक्ष बन्दै आएका छन् ।
मानव समृद्धिको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुरक्षित समाज हो । जहाँ हरेक नागरिकले यौनिकता, जात, क्षेत्र, वर्ग वा अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् । यस किसिमको समाज निर्माणका लागि अधिकार र कानुनका अगाडि मात्र सबै समान हुन भनेर पुग्दैन, नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हरेक नागरिक समानरुपमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 6:28:00 AM No comments: